Shir looga hadlayo ilaalinta Deegaanka oo Qardho lagu qabtay. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Shir looga hadlayo ilaalinta Deegaanka oo Qardho lagu qabtay.
Shir looga hadlayo ilaalinta Deegaanka oo Qardho lagu qabtay.
Ujeedada shirkaan ayaa salka ku haysa sidii laysaga kaashan lahaa ka hortaga iyo joojinta dhulka sida sharci darada ah loo seeraysto, waxaa sidoo kale laga dooday sidii laysugu afgaran lahaa halka ku haboon deegaan ahaan iyo dhulka u baahan in loo aqoonsado soono daaqsimeed madaxbanaan, dawlada iyo odayaashu intay shirka ku jireen waxay walaac ka muujiyeen dadka dibadaha ku dhaqan oo lacago tira badan soo dhiiba si loogu iibiyo dhul balaaran oo dooxooyin ah, waxayna tilmaameen in lacagahooda aysan iska khasaarin.
Gudoomiyaha Degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in lays ku afgartay in la sameeyo gudi qiimayn ku sameeya dhulka hadda la seeraystay, in dawlada iyo odayaashu ay iska kaashadaan in dib loo furo dhulka la seeraystay ugu danbayna in looga digo dhamaan dadka hadda ku mashquulsan seerayntaas loona sheegon in dawladu ay talaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonto.
Qaar ka mida odayaasha dhaqanka dhankooda waxay adkeeyeen warka gudoomiyaha iyagoo tilmaamey in ay kala shaqayn doonaan maamulka, masuuliyad wadareedna ay tahay ilaalinta deegaanka.
Isuduwaha Wasaarada Deegaanka ee Gobolka Karkaar Maxamed Muuse waxa uu sheegay in cidii lagu qabto iyagoo seeraynaya goobo sharci daro ay ku qaadii doonaan xeerarka Puntland uga degan. sidoo kale maxkamadaha iyo nootaayooyinka ayuu uga digay in ay bixiyaan warqado sharci daro ah oo muujinaya lahaansho aan jirin.